Barcelona oo doon dooneysa Lautaro Martinez - Radio Risaala: Somali News Online
Home Ciyaaraha Barcelona oo doon dooneysa Lautaro Martinez
Barcelona oo doon dooneysa Lautaro Martinez
Wakiilka Lorenzo De Santis ayaa rajeynaya in Barcelona ay u dhaqaaqdo weeraryahanka kooxda Inter Milan Lautaro Martinez.
De Santis ayaa qiray in lacagta Lautaro ee lagu burburin karo ay ka dhigeyso inuu u soo jiito kooxda Catalans.
Wuxuu u sheegay saxaafada: “Lautaro waa weeraryahan aan caadi aheyn, wali aad u da ‘yar.
“Waxa uu leeyahay hadaf weyn oo horumar lagu sameeyo, wuxuu heystaa xilli heerkiisu ugu sareeyay, lambarada ayaa muujinaya sida uu u caawiyay kooxdiisa.
Marka loo eego da’diisa iyo wax qabadkiisa qiimaha 111 milyan euro waa mid soo jiidana Barcelona
“Markaa wax qarsoon ma ahan in Messi uu leeyahay dareen gaar ah oo uusan ku qarin karin sida uu u jecel yahay inuu la ciyaaro isaga.
Previous articleSomaliland oo karantiishey 16 Ruux
Next articleMan United oo Dhaawacyo ka qabsaday saxiixa Jadon Sancho